05/10/2018 - Page 2 sur 3 -
Ambodinisotry : Trano roapolo tafo narodana
Fianakaviana manodidina ny 20 no rava trano omaly maraina, teny Ambodinisotry. Tsy nisy ny fampandrenesana mialoha fa mpitandro filaminana niaraka tamin’ny vadintany nilaza ho manana taratasy, handrava ny trano no tonga teny an-toerana, araka ny …Tohiny
AIZA NO ALEHA : La cabane – Andavamamba
Hira ho anao miaraka amin’ny Olombelo Ricky Taorian’ny Manal’azy vita bacc, manome fotoana ireo mpankafy azy indray ny Olombelo Ricky, amin’ny seho takariva etsy amin’ny La Cabane Andavamamba, anio alina manomboka amin’ny 9 ora alina. …Tohiny
Mihamafana indray ny toe-draharaham-pirenena tamin’ity herinandro ity, raha toa somary nangingina izany hatramin’ny herinandro teo. Ny fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana no tiana hambara eto. Nampiaka-peo noho ireo tsy fetezan-javatra maro amin’ny fikarakarana mantsy ireo …Tohiny
Hatramin’ny 2017 : Tsy misy miraharaha ireo adala mirenireny
Mihamitombo ny olona tratran’ny fikorontanana ara-tsaina, na adala vokatry ny fiainana mihasarotra, fa ihany koa noho ny fidorohana zava-mahadomelina. Ireny adala ireny, izay loza mitatao ho an’ny fiarahamonina, satria tsy vitan’ny mirenireny fa tena mamono, …Tohiny